Vehivavy - Tsarabika
Misy entana 89 isa.
Fitaovana tena avy lenta, hoan'ireo mpanao volo efa zadraharaha, na ihany koa ireo izay te-hanana fitaovana tsara ao an-trano. fitaovana fanaovana volo 'lisseur boucleur' mitondra ny marika 'ipro230'. Tena matanjaka, sy mateza, tsy mora maty, nefa mora ampiasaina ihany koa.
Ity indray ny fametrahana ireo firavaka izay fampiasanao matetika. Azo ametrahana rojo, peratra, famataranandro ... Vita avy amin'ny plastika mafy tsara izy ity. Sady fitaovana no haingon-trano ihany koa
Akanjo fitondra manao fanatanjahantena amin'ny endriny hafa indray. Natao ho an'ny vehivavy, ary misy lokony mainty sy fotsy. Tena mety be, ho an'ireo mpikotrana any ivelany, na ao an-trano.
"Bracelet" ho an'ny vehivavy. Mba mampiavaka sy manendrika ny tànana. Tena tsara izy ireot ary misy karazany maromaro. Toy ny volafotsy mangrana tsara, ary azo hoentina amin'ny fotoana rehetra.